Matio 4 - Ny Baiboly
Matio toko 4
Ny nifadian'i Jesoa-Kristy hanina sy ny nakan'ny demony fanahy azy - Nanomboka nitory teny sy niantso ny Apostoly izy.
1Ary tamin'izay dia nentin'ny Fanahy nankany an'efitra Jesoa, mba halain'ny demony fanahy; 2ary nifady hanina efa-polo andro sy efa-polo alina izy, ka noana nony afaka izany. 3Dia nanatona ny mpaka fanahy ka nanao taminy hoe: Raha Zanak'Andriamanitra hianao, asaovy ho tonga mofo ireto vato ireto. 4Fa namaly izy ka nanao hoe: Efa voasoratra hoe: Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan'Andriamanitra. 5Tamin'izay dia nitondra azy nankany amin'ny tanàna masina ny demony ka nametraka azy teo an-tampon'ny tempoly, 6dia nanao taminy hoe: Raha Zanak'Andriamanitra hianao, mianjerà any ambany any, fa efa voasoratra hoe: Ny anjeliny no nametrahany anao, ary izy ireo hitondra anao eo an-tànany, fandrao ho tafintohina amin'ny vato ny tongotrao. 7Fa hoy Jesoa taminy: Efa voasoratra koa fa: Tsy haka fanahy ny Tompo Andriamanitrao hianao. 8Dia nentin'ny demony nankany ambonin'ny tendrombohitra avo dia avo indray izy, ka nasehony azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mbamin'ny voninahiny, 9ary hoy izy taminy: Homeko anao izao rehetra izao, raha miankohoka hivavaka amiko hianao. 10Fa izao no navalin'i Jesoa azy: Mandehana, ry Satana, fa efa voasoratra hoe: Ny Tompo Andriamanitrao no hivavahanao, ary izy irery ihany no hotompoinao. 11Tamin'izay dia nandao azy ny demony, ary indreo nisy anjely tonga teo aminy ka nanompo azy.
12Ary nony ren'i Jesoa fa natao an-tranomaizina Joany, dia lasa izy nankany Galilea; 13ka nony niala tany Nazareta dia tonga tao Kafarnaoma, tanàna amoron-dranomasina ao amin'ny sisin-tanin'i Zabolona sy Neftalì ka nonina tao, 14mba ho tanteraka ny teny nolazain'Izaia mpaminany hoe: 15Ny tanin'i Zabolona sy ny tanin'i Neftalì, ny làlana ao amoron-dranomasina, any an-dafin'i Jordany, i Galilean'ny jentily: 16ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita fahazavana lehibe, ary ireo izay nitoetra tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana no niposahan'ny mazava. 17Hatramin'izay dia nanomboka nitory teny Jesoa ka nanao hoe: Mibebaha hianareo, fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra.
18Ary raha nitsangatsangana teny amoron-dranomasin'i Galilea Jesoa, nahita olona mirahalahy, dia Simona ilay atao hoe Piera sy Andre rahalahiny, nanarato teo amin'ny ranomasina, fa mpanarato izy ireo. 19Dia hoy izy taminy: Avia hanaraka ahy, fa hataoko mpanarato olona hianareo. 20Dia nandao ny haratony niaraka tamin'izay izy ireo, ka nanaraka azy. 21Dia mbola nandroso ihany izy, ka nahita olona mirahalahy hafa koa, dia Jakoba zanak'i Zebede sy Joany rahalahiny izay teo an-tsambo niaraka tamin'i Zebede rainy, nanamboatra ny haratony; ary nantsoiny izy mirahalahy. 22Nandao ny haratony sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ireo, ka nanaraka azy.
23Ary Jesoa nitety an'i Galilea manontolo, nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona, sy nitory ny Evanjelin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary nanasitrana ny aretina sy ny rofy rehetra tamin'ny olona. 24Dia niely eran'i Siria manontolo ny lazany, ka nentin'ny olona tany aminy ny marary rehetra izay azon'ny aretina sy ny fijaliana samihafa, dia ny mararin-javatra, ny mararin'ny androbe, ny malemy, ka nositraniny ireny. 25Ary be ny vahoaka avy tany Galilea sy Dekapaoly sy Jerosalema sy Jodea, ary avy tany an-dafin'i Jordany no nanaraka azy. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0437 seconds